musha UNITED UMAMBO FOOTBALL STORI Vatambi Vanotamba Yevatambi Harry Winks Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius iyo inonyatsozivikanwa nezita rezita rokuti "Little Iniesta". Our Harry Winks Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira panguva yehucheche kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, mhuri yemhuri, nyaya yehupenyu musati mazita, kusimudzira mukurumbira nyaya, ukama uye hupenyu hwehupenyu.
Hungu, munhu wose anoziva nezvemaonero ake akanaka, chimiro chiduku uye chimiro chekutamba. Zvisinei, vashomanana chete vanoona Harry Winks 'Biography iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Harry Winks Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts-Upenyu Hwekutanga uye Hwemhuri
Kutanga, zita rake rose ndiHarry Billy Winks. Harry Winks sezvaanoziva kuti akaberekwa musi we 2nd yaFebruary 1996 kuna amai vake, Anita Winks nababa, Gary Winks muHemel Hempstead, United Kingdom.
Harry akaberekerwa kumhuri ine rudo yebhola. Baba vake Gary vaimbova mutevedzeri wemutambo wenhabvu uyo ​​akatamba Hemel naBerkhamsted. Mhuri yeWinks yakanga iri nguva yakareba yePursse mutsigiri kubvira kare kubvira 1984 mushure mokunge Spurs UEFA mukombe watsva.
Kutaura nezvehupenyu hwemhuri kana mavambo, Harry Winks anobva kumhuri yekuzvarwa kweSpanish kuburikidza naamai vake navanasekuru navanasekuru. Kunyange zvakadaro anozvikudza nokuva muBritish kuburikidza nababa vake. Harry akakurira nemukoma wake muduku ainzi Milli waanodzivirira kwazvo.
Kunyangwe ari pamba kana kushamwaridzana nehanzvadzi dzake, Harry inoratidzwa pasi apa aizoramba achitarisa hanzvadzi yake yakanaka.
Nhasi, zvakanaka chaizvo uye zvinodada nokuda kweMilli kuti aone mukoma wake mukuru, munhu wepedyo uye waimbova shamwari naye mukupara mhosva achiwana kuwanda kwehutano kubudirira.
Iye zvino sepanguva yekunyora, hapana munhu munyika ane chisungo chakasimba icho chakagoverana pakati peHarry, Milli nevana vavo Anita.
Harry Winks Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts- Career Buildup
Achitaura nezveve fan fan, baba vaHarry Gary vakamboti:
Zvechokwadi Harry ishamwari yeSpurs, yakamanikidzwa kwaari neni!
Harry sezvaiita amai vake nababa vakanga vari Tottenham Hotspur kufambisa kunyange asati atanga kutamba bhora. Harry akapinda mumusangano wake wekutanga wekuyeuka pa White Hart Lane paaiva nemakore matanhatu. Kuona zvinoda zve Michael Carrick, Robbie Keane uye Teddy Sheringham akamukurudzira kuti atange kurovera chero chinhu chaiita senge bhora renhabvu.
Achitaura nezvehupenyu hwemwana wake webhobho semucheche, mumamu waHarry Wink's Anita akamboudza Gwaroti:
"Kunyange semwana muduku Harry aizotamba necheketi yakanyunguduka. Angave achizviputira kwose kwose nguva dzose. Akabva atamira bhora re tennis. Anogara achingozvikomba kumativi ose eimba, achinditsamwisa! "
Kana iyo isina kukwepa bhora bhiza kumativi kana mukati memba yake yemhuri, Harry aizoonekwa achida kutenderera pedyo neposer David Beckham uye Michael Owen.
Pasinei nekuda kwaHarry kwaSpurs, akasarudza kuzvibatanidza nehembe reEngland uye shorts. Kutarisa pamifananidzo yake yepamusoro, iwe uchacherechedza iyo yaive yakada jersey zvinhu.
Senguva yekunyorwa, yeEngland National Jersey inokodzera munhu akanaka kwazvo.
Harry Winks Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts- Basa Rokutanga Kutanga
Kugona kwaHarry kwakatanga kuonekwa pazera re5 apo vabereki vake vakanyoresa pabato reRoss & Andy's Soccer Camps. Akaenderera mberi achitamba naEchoes FC muHemel Hempstead apo matarenda ake chaiwo akazozivikanwa zvikuru.
Harry aizivikanwa seumwe munhu ane simba uye pasinei nepfungwa yake yakasimba, aizoramba achitsvaga nechokuita nesimba rakanaka. Pakutanga, Harry akawana dzidzo yake yepamberi yebhora neCavendish School yepamusoro apo yaakapedza pazera re11.
Harry Winks Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts- Upenyu Hwokutanga paSpurs
Achitenda kuti akwanisa kubata bhora achiri mwana, Harry akakurudzirwa nemudzidzisi wake paRoss & Andy's Soccer Camps kuti apinde muTottenham Hotspurs miedzo. Akapfuura ndokunyora pachikwata. Kunyangwe kuTottenham academy, mapoka akawanda akaramba achimubata semudiki.
Vabereki vaHarry Anita naGary vaida chaizvo kusimbisa zvibayiro zvakawanda zvakaitwa naHarry pamazuva ake okutanga kuTottenham. Kutanga, sevechiri kuyaruka, Winks yakatambura nekukuvara nekukura kwekutambudzika. Pasinei neizvozvo, mukuru wechikoro McDermott aive nokutenda mumukomana muduku sezvaaita nevanokurumidza-kukura, zvakadai Kane uye Andros Townsend. Even Teddy Sheringham akatora kufarira zvikuru vechidiki veWinks uye Scott Parker akabuda semuongorori.
Harry Winks Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts- Chisarudzo chikuru nekukwira Mukurumbira
kuitira kuti azvitsaurire upenyu hwake kumaroto ake, Harry akasarudza kubva kunze kweimba yemhuri pazera remakore 16 kuti ararame pedyo neSpurs kudzidzisa pasi. Chisarudzo chakanga chisisiri chiri nyore kumhuri yeWinks. Maererano nemukadzi wake Anita;
Harry aifanira kuchinja, mupfungwa. Akange ane hanya, uye kuenda kumakore iwayo kwakanga kwakaoma. Vose vatatu vedu-ini, Gary, naMillioni vakamira ndokuchema sezvaakavhara suo rokumusoro pamberi pedu.
Vabereki vaHarry vaizomuona rimwe manheru pavhiki. Maererano naHarry, kufamba kubva kumusha wemhuri kuti ugare nevanhu vaakanga asati amboonana naye pamwe ndicho chakaoma pane zvose zvaakanga aita muupenyu hwake hwose. Harry akaenderera mberi kugara muSouthgate, nzvimbo yemuguta iri kuchamhembe kweLondon. Akagara nevarume vakaroorana vakanaka vainzi Lesley naMate vane imba yavo yaiva pedyo neSpurs vechidiki kudzidzisa pasi. Nenguva isipi, Matt uyo akanga ari murayiridzi wekutyaira akadzidzisa Harry kutyaira.
Harry Winks Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts- Simuka Mukurumbira
Kutsunga kwaHarry kuti ave nyanzvi hakuna kuenda semafungiro anopfuura. Musi wa 27 July 2014, akasaina chibvumirano chake chekutanga chekuita neTottenham mushure mekunge achifadzwa Mauricio Pochettino uyo oga akatarisa mavhidhiyo emitambo yake.
Pochettino akaona Harry semutambi akafanana nehama dzake dzeSpain Xavi uye Iniesta. Akatarisawo iye akasiyana zvachose nevatendi vake; Victor Wanyama, Eric Dier, Mousa Dembélé uye Moussa Sissoko. Hondo yekutanga yegariro yekuita chinangwa yakaratidza kuti iye ne Mauricio Pochettino vakanga vave nehukama hwakasimba kubva pakusangana kwavo kokutanga.
Zvinotyisa, Harry akatumidzwa kuEngland pasinei nekuita mane chete anotanga mubato reSpurs. Gareth Southgate akamutora kuti aongorore kudhindwa kwake.
Harry Winks Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts- Ukama Hupenyu
Waizviziva Here? Mumumishinari wose wemukomana, musikana wacho aiwanzowa kakawanda nokuda kwebhokisi rakakurumbira. Pane imwe nguva muupenyu hwomusikana uyu, zvakaderera pasi, pane nguva dzose unoda kufambidzana nenyeredzi. Zvinosuruvarisa, Mafirimu haatombotiratidzi kukanganisa kwekufambidzana nemutambo wemutambo. Ichi ndicho chikonzero chimwe chete chakaita kuti Harry ave asina kuroora mumakore okutanga ehukuru hwake.
Nhoroondo yekutanga yeHarry yakauya panguva ye 22 (July 2018) paakaonekwa neBrithani chaiyo mukadzikadzi, Rosie Williams uyo ane makore 4 ake mukuru. Vose ava vakamboona vachisiya hotera ye5-star, hoteli yeLondon Shangri-La.
Mumufananidzo, Harry akazviratidza kuva munyoro wakakwana kuna Rosie sezvaakabata musuo wakazaruka kwaari. Iyi yakanga iri nguva Rosie akangobuda kunze kweBritish Love Island chaiyo inoratidza. Achipinda mu-blazer yellow blazer, mukadzi weWales aifanira kuisa chiratidziro chakanaka kune murume waaida. Nguva bedzi ichataura kana Harry achizomutora semusikana kana mukadzi.
Harry Winks Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts- Upenyu hwehupenyu
Harry akaberekwa anonyara uye akanyarara, asi kune rumwe rutivi, anogona kunge asina simba uye ane simba. Sezvakaonekwa kubvira mumazuva ake achiri muduku, Ndiyo munhu anogona kuchinja nyore nyore kuchinja kwezvakatipoteredza kana chero simba idzva rakamupoteredza.
Waizviziva Here? Kusiyana nevamwe vemaqheti, Harry Winks haaswedere pedyo nevateveri. Izvi zvakaitika nokuti akamborayirwa zvakashata pakuita zvakanaka. Zvino regai ndikuudzei zvakaitika zvechokwadi!
Harry akanga kamwe makwapa ari kirabhu Watford nemukuru kurudza uyo zvakakomba akakumbira midfielder kuti pikicha pamwe anotsinzina vasingazivi isakarurama vavariro. Zvinotyisa, mumwe fanasi anonzi Nikhil Shah akatumira chinyorwa pamusana pevhesi yezvemagariro evanhu achifumisa Winks pakuenda kubhubhu pasinei nekuyamwisa kukuvara.
Mufambi wacho akaendawo kusvika pakuedza kupinda Zuva kukurukura kutengeswa kwemufananidzo uyo zvichida wakapfuura. Pasi pane chinyorwa chezvinhu izvo zvinongotarisa asi zvakashata-zvakagadzirirwa Nikhil Shah akanyora mushure mekutumira mufananidzo pane Instagram yake.
Izvi zvinotsanangura chikonzero nei Winks isinganyanyi kunetseka nevafudzi kunyanya munzvimbo dzisina kururama. Pasinei nekuedza kwose kuwana huwandu hwekudhura, Shah akaparadzwa nemavhesi nekuedza kubuda kunze kweWinks.
A CoD Fan: Harry anozviona pachake akapindwa muropa kune Call of Duty game.
Harry pasinei nemararamiro ake ematambo ebasa achiri kuwana nguva yekupinda ku Call of Duty zviitiko.
Harry haasi iye akapindwa muropa sezvakaitwa Hector Bellerin uyo akambotamba CoD kwemaawa 30 pavhiki.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nokuverenga vedu Harry Winks Childhood Story pamwe Untold Biography Facts. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
Danny Ings Mwana Wenyaya Nhau Untold Biography Facts